ကုလသမဂ္ဂက ၎င်းတို့၏ ကွန်ပြူတာများ ဧပြီလတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း အတည်ပြု - Xinhua News Agency
COVID-19 ရောဂါ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေခြင်းသည် သိပ္ပံပညာရပ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မတူညီသောနေရာများ၌လည်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်
ကုလသမဂ္ဂ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ပြူတာများ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း Bloomberg သတင်းဌာန၏ ရေးသားဖော်ပြချက်ကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂက အတည်ပြုခဲ့သည်။ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric က “ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အခြေခံအဆောက်အဦပိုင်းထဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ အမည်မသိ တိုက်ခိုက်သူတွေက ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုပါတယ်။”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“Bloomberg ဆောင်းပါးထဲမှာ ကိုးကားဖော်ပြထားတဲ့ ကုမ္ပဏီက ကျွန်တော်တို့ကို အကြောင်းမကြားမီမှာပဲ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်သလို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်က ဆိုက်ဘာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို အတည်ပြုပေးတာ ၊ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ မျှဝေပေးတတာ စတာတွေအတွက် ကုမ္ပဏီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်မှုများ အပါအဝင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် အစောပိုင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ထိုးဖောက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သလို ယင်းအား တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကွန်ပြူတာကွန်ရက်များအား ဟတ်ကာများက ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများအား ပစ်မှတ်ထားရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များ ရရှိသွားကြောင်း Bloomberg က စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ခိုးယူခံရသည့် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ username နှင့် password ကို ဟတ်ကာများက dark web မှ ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဧပြီလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုက မည်မျှ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
UNITED NATIONS, Sept.9(Xinhua) — The United Nations on Thursday confirmedaBloomberg report about an April 2021 cyberattack on UN computers.
“We can confirm that unknown attackers were able to breach parts of the United Nations (communications) infrastructure in April of 2021,” said Stephane Dujarric, spokesman for UN Secretary-General Antonio Guterres.
“This attack had been detected before we were notified by the company cited in the Bloomberg article, and corrective actions to mitigate the impact of the breach had already been planned and were being implemented. At that time, we thanked the company for sharing information related to the incident and confirmed the breach to them,” said the spokesman.
Bloomberg reported Thursday that hackers breached the United Nations’ computer networks earlier this year and obtainedatrove of data that could be used to target UN agencies.
The UN spokesman did not say how detrimental the April attack was. Enditem
Photo – A woman walks past the United Nations headquarters in New York, the United States, Sept. 14, 2020. (Xinhua/Wang Ying)